एउटा संसार बदल्न चाहाने केटोको कथा जसले तपाईको आँखा खोलिदिन्छ | Success Open University
एउटा संसार बदल्न चाहाने केटोको कथा जसले तपाईको आँखा खोलिदिन्छ
By sopenu | October 26, 2017
कुनै शहरमा एउटा केटो थियो । ऊ दुनियामा केहि गरेर देखाउन चाहान्थ्यो । उसले सोच्यो – यो संसारमा यति धेरै समस्याहरू छन । मान्छेहरु स्वार्थि छन । म संसारलाई नै बदल्छु । आफुले चाहे जस्तो सुन्दर र समृद्द बनाउछु ।
समय बित्दै गयो । ऊ अब केटोबाट युवा हुन लाग्यो अनि उसलाई लाग्न थाल्यो, संसार बदल्न त निक्कै कठिन रहेछ, अब म आफ्नो देश बदल्न चाहान्छु । उसले देश बदल्न पनि आफुले सके जति कोसिश गर्यो । उसको उमेर पनि बढ्दै गईरहेको थियो । अब उसलाई लाग्न थाल्यो कि देश बदल्न पनि निक्कै गाह्रो काम रहेछ, अब म आफ्नै शहरलाई बदल्छु ।
समय आफ्नै गतिमा बितिरहेको थियो । त्यो पहिलाको जोश र उत्साहले भरिएको केटो अब बुढ्यौलिमा चढिसकेको थियो । उसमा बिस्तारै जोश र जाँगरहरु कम हुदै गरिरहेका थिए । उसलाई लाग्न थाल्यो यो शहर बदल्ने काम पनि साह्रै गाह्रो रहेछ । अब म आफ्नै परिवार बदल्छु र ढुक्कले बस्छु । तर अन्तमा समय निक्कै बितिसकेको थियो । उसलाई एउटामाथि अर्को समस्याले गाँजिरहेको थियो । यसर्थ उसले आफ्नो परिवार पनि बदल्न सकेन ।
यसरी उसले आफ्नो उमेरको ६० औं बसन्ततिर आइपुग्दा महसुश गर्यो – म जहिले संसार बदल्छु भनेर लागेको थिँए, त्यो समयमा मैले आफैलाई बदल्न अर्थात आफुलाई योग्य बनाउन उच्च शिक्षा लिएको भए, मैले आफैलाई अरुभन्दा अब्बल बनाउन समय दिएको भए, म आफ्नो परिवार बदल्न सक्थे । परिवारको माध्यमबाट आफ्नो टोल र शहर बदल्न सक्थे । शहर बदलिसके पछि म आफ्नो देश बदल्न सक्थे र आफ्नो देश बदलेर संसारलाई म केहि सन्देश दिन सक्थे ।
माथिको कथामा भनेझै हामी धेरैको जिन्दगी यसै गरि खेर गईरहेको छ । वास्तबमा नै हाम्रा दार्शनिक योगी बिकाशानन्दले ठिकै भनेका रहेछन – संसार बदल्नु छ भने सुरुवात आफैबाट गर ।
यदि तपाईलाई यो कथा मन पर्यो र अरुलाई काम लाग्ला जस्तो लाग्यो भने कृपया शेयर गरिदिनुस है ।
Category: More Tips Story Success
← के यि समस्याहरुले गर्दा सफल हुन सक्नु भएन ? त्यसो भए यिनिहरुबाट सिक्नुहोस खुसीको खबर ! अब तपाईको मोबाइल चार्ज गर्नै नपर्ने →